Ciidamo katirsan maamulka Somaliland oo lagu soo waramay in ay yimaadeen deegaano kuyaala gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamo katirsan maamulka Somaliland oo lagu soo waramay in ay yimaadeen deegaano kuyaala gobolka Sanaag
Ciidamo katirsan maamulka Somaliland oo lagu soo waramay in ay yimaadeen deegaano kuyaala gobolka Sanaag
March 10, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamo ka socda maamulka Somaliland ayaa soo gaaray deegaano kuyaala gobolka Sanaag labadii maalmood ee u dambeysay, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan dadka deegaanka.
Ujeedada ciidamada ayaa ah in ay ka hortagaan jabhadda uu hoggaamiyo Kornayl Caare taasoo dhaqdhaqaaqyo ka bilowday deegaano kuyaala gobolka Sanaag, sida ilo-wareedku sheegeen.
Ilo-wareedka ayaa intaas ku daray in ciidanku ay ku hubeysanyihiin gaadiidka dagaalka.
Kornayl Caare oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada maamulka Somaliland ayaa ka goostay bartamihii sanadkii 2018, waxaana uu asaasay jabhad ka dhan ah Somaliland oo fadhigeedu yahay gudaha Puntland. Jabadda ayaa koraysay tan iyo wakhtigaas iyada oo ciidamo badan oo kasoo goostay Somaliland ay ku soo biireen.
Diyaarad ay leedahay Ethiopian Airlines oo burburtay
NUSOJ oo sheegtay in shan wariyeyaal ah lagu dilay Soomaaliya sanadkii 2017
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shan wariyeyaal ah ayaa lagu dilay Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay ee 2017-ka, sida lagu sheegay warbixin sanadeed ay soo uruurisay Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliya ee NUSOJ. NUSOJ ayaa warbixinteeda ku sheegtay in tirada [...]